व्यावसायिक ऋण - एक ... लघु व्यवसाय उधारो। बैंक क्रेडिट: ऋण को प्रकार
मिति, बैंकहरू विभिन्न ऋण कार्यक्रम प्रस्ताव। ऋण साना व्यापार र अन्य उद्देश्यका समर्थन प्रदान गर्न सकिन्छ। आजकल अधिकांश मानिसहरू एक छ बैंक ऋण। बंधक, उपभोक्ता, कार ऋण र क्रेडिट कार्ड: जनसंख्याको बीचमा लोकप्रिय छन् कि ऋण को प्रकार।
सबैभन्दा महंगा ऋण
यो सबैभन्दा महंगा ऋण उपभोक्ता, साथै क्रेडिट कार्ड हो कि विश्वास छ। यो कारण आयोग तिनीहरूलाई छ overstated समयमा, सामान्य मा, यसलाई प्रतिवर्ष 50% पुग्न सक्दैन भन्ने तथ्यलाई छ। तर, सबै भन्दा महंगा ऋण एक बंधक छ। Overpayments सयौं र rubles को पनि लाखौं हुनेछ। तर यी अवस्थाको बाबजुद, त्यहाँ बैंक ऋण लिन चाहन्छ जसले धेरै स्वयंसेवकहरु छन्। ऋण बढी प्रकार तल छलफल गरिनेछ।
सबैभन्दा जनसंख्याको बीचमा लोकप्रिय छ। अक्सर मानिसहरू ठूलो घर उपकरण खरीद लागि उहाँलाई लिन: .. फ्रिज, टेलिभिजन, लुगा धुने मेसिन, आदि यो यस्तो यात्रा एजेन्सी एक टिकट खरिद गर्न रूपमा सेवा अन्य कम्पनीहरु उहाँलाई कारण, भुक्तानी गर्न पनि सम्भव छ। ऋण सर्तहरू एक वर्ष धेरै महिनाका दायरा। यसलाई दुई भागमा विभाजन गरिएको छ: छुट्याएको र गैर-उधारो। उदाहरणका लागि, ग्राहक एक फ्रिज किन्न आवश्यक छ। उहाँले सही उत्पादन र बैंक, उहाँलाई दिन्छ जो छनोट, पसलमा मा आउँछ लक्ष्य क्रेडिट।
ऋण को दोस्रो प्रकार बैंक नै जारी। ग्राहक, एउटा सम्झौता अप ड्र आवश्यक रकम अप उठयो र आफ्नो विवेकमा पैसा खर्च। अर्को महिना उधारकर्ता बैंक एक निश्चित रकम दिन्छिन्।
बंधक ऋण अचल सम्पत्ति खरिद गर्न जारी। खरिद आवास एक माध्यमिक हुन वा नयाँ भवन मा हुन सक्छ। ऋण को परिशोधन को ग्यारेन्टी एक घर वा उधारकर्ता स्वामित्वमा अन्य अचल सम्पत्ति किनेको छ। बैंक यो सेवा प्रदान, तपाईं कुल 10% को राशि, पहिलो installment तिर्नुपर्छ। साथै, उधारकर्ता खरिद र आफ्नै स्वास्थ्य सम्पत्ति बीमा गर्न आवश्यक हुनेछ। सबै वित्तीय लागत उधारकर्ता कवर हुनेछ। 10 30 वर्ष लिएर बंधक भुक्तानी सर्तहरू।
Autocredit नयाँ वा समर्थित कार प्राप्त गर्न जारी। यस मामला मा, उधारकर्ता आफ्नो स्वास्थ्य र स्वतः CASCO कार्यक्रम बीमा गर्न आवश्यक हुनेछ। ऋण को परिपक्वता - केही महिना वा बढी।
क्रेडिट कार्ड एक सुविधाजनक भुक्तानी प्रणाली छ र धेरै मानिसहरूलाई धेरै लोकप्रिय छ। यो पसलहरुमा खरिदका लागि सम्भव छ। यो नक्सा पैसा बैंक सूची। क्रेडिट कार्ड को उपयोगिता तपाईं धन बिना कुनै पनि खरिद गर्न सक्ने छ। एक धेरै उच्च ब्याज दर - तर एक महत्वपूर्ण drawback छ। लेट भुक्तानी को घटना मा, गंभीर पेनाल्टी द्वारा पछि लागे।
यस मामला मा, उदाहरणका लागि एक कार, धरौटीको सम्पत्ति मा केही मात्रामा दिइएको। यस्तो ऋण को मुख्य drawback छोटो अवधि ऋण परिशोधन छ।
व्यावसायिक ऋण साना व्यवसायहरू लागि
व्यावसायिक ऋण - यो दुई संगठन बीच एउटा सीधा विनिमय छ। पहिलो संगठन पैसा दिन्छ, र तिनीहरूलाई को दोस्रो कुनै पनि उत्पादन वा सेवा प्रदान गर्नुहोस्। यो ऋण साना व्यवसायहरू लागि वित्तीय सहयोग को लागि सबै भन्दा राम्रो विकल्प छ।
साना व्यापार ऋण अक्सर कारण व्यावसायिक क्रेडिट गर्न हुन्छ। ऋण को यस प्रकार बैंक द्वारा जारी छ जो एक शास्त्रीय ऋण, छैन। क्रेडिट यस्तो को जारी बीच बाहिर गर्न सकिन्छ व्यावसायिक संगठनहरू। ऋण को मुख्य सार एक संगठन अर्को उत्पादन वा सेवाको लागि रकम प्रदान गर्दछ र दुई पक्ष एउटा सम्झौता र सम्झौता हस्ताक्षर छ। उदाहरणका लागि, एक कम्पनी धातु को अर्को 20 टन बिक्री भएको छ। यस मामला मा एक टन लागत 4000 rubles छ। करार अन्तर्गत परिशोधन लेनदेन को निष्कर्षमा पछि7महिना पछि गरिनेछ। एक ऋण प्राप्त जो पछि सार्ने काम संगठन, को मामला मा, यो भुक्तानी गर्न प्रत्येक महिना बेचिएको धातु को राशि को एक अतिरिक्त 5% बाध्य छ।
विशेष गरी व्यावसायिक क्रेडिट
को creditor को भूमिका मा खरीदारों तर पनि विक्रेता मात्र होइन कार्य गर्न सक्छ। पहिलो मामला मा, खरीदार वाणिज्य ऋण लागि पैसा केही मात्रामा बनाउँछ। यो उत्पादन वा सेवाको लागि एक पूर्व-भुक्तानी छ। एक ऋणदाता एक विक्रेता कार्य रूपमा भने, ऋण दिंदा गर्दा जो लागि खरीदार ऋण तिर्न बाध्य छ अवधि गणना गरिएको छ। installments मा ऋण चुक्ता गर्न संभावना पनि छ। तर यो मामला मा यो ब्याज दर लागि प्रदान गरिने छ।
व्यावसायिक क्रेडिट को मुख्य लाभ पारंपरिक बैंकहरुमा भन्दा धेरै कम छ कि एक प्रतिशत छ। यो सिर्फ दुई पक्ष आवश्यक - लाभ ऋण वाणिज्य छ भन्ने तथ्यलाई समावेश गर्नुहोस्। को क्रेता उहाँले तुरुन्तै बन्द तिर्न सकेन जसको लागि बस वस्तुहरू किन्न मौका प्रदान गरिएको छ। र विक्रेता ग्राहक आधार Replenish हुनेछ। यो ब्याज दर पहिले नै सामान को लागत मा समावेश गरिएको छ कि टिप्पण लायक छ। संगठन दुवै ऋण प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ, र तिनीहरूलाई प्राप्त। यो वास्तवमा यो सम्भव एकदम वित्तीय लागत सुरक्षित बनाउँछ। यो सानो व्यापार उधारो धेरै अनुकूल सर्तहरू जाँदै मार्फत छ।
मुख्य बेफाइदा विक्रेता बताउँछन् सीमित वस्तु आरक्षित। र त, यसको क्षमताहरु विस्तार गर्न, संगठन अक्सर प्रयोग गरिन्छ जाँच र बिल को गणना मा। साथै, खरीदार बस दिवालिया जाने र समय ऋण चुक्ता छैन सक्ने एउटा निश्चित जोखिम छ। एक प्रमुख shortcoming ऋण को छोटो अवधि हो। तर केही संगठनहरूको आफ्नो ग्राहकहरु प्रदान गर्न सक्छन् आस्थगित भुक्तानी।
ब्याज दर रूपमा, प्रत्येक ग्राहक यो मामला मा व्यक्तिगत छलफल भएको छ। करार को ऋणदाता प्रदान गर्दछ प्रदान गर्दछ भने उधारकर्ता छैन पैसा कुराहरू ब्याज दर सफाया छ कि छ, र। उधारकर्ता ऋण सम्झौताको उल्लङ्घन थिए भने, उहाँले राम्रो तिर्नुपर्छ। असल को रकम पनि व्यक्तिगत आरोप लगाएको छ। करार एक निश्चित ब्याज दर प्रदान गर्दैन भने, देंगे दर प्रयोग गरिन्छ। उधारकर्ता ब्याज दर बातचीत गर्न चाहनुहुन्छ भने, यो एक व्यावसायिक बैंक बाट यस्तो ऋण लिन सक्छ।
व्यावसायिक ऋण को प्रकार
व्यावसायिक ऋण - यो ऋण, धेरै भागमा विभाजन गरिएको छ जो को प्रकार: भुक्तानीको एक सेट अवधि, भुक्तान सबै सामान, खुला खाता कार्यान्वयन पछि। उत्तरार्द्ध मामला मा, संगठन अघिल्लो एक चुक्ता गर्न एक ऋण प्राप्त गर्दछ। यो केवल एक लामो समय को लागि सँगै काम गर्दै ती संगठनका लागि जारी गरिएको छ।
व्यावसायिक ऋण केही अन्य प्रकारका के हुन्? एक पनि छ कागज क्रेडिट, विशेष बिल कागजातहरू को जारी लागि प्रदान गर्दछ जो। यी कागजात अनुसार, उधारकर्ता संगठनको र निर्धारित समय भित्र केही मात्रामा भुक्तानी गर्न आवश्यक छ। त्यहाँ एक नयाँ उत्पादन को एक बोध छ र यसको लागि मांग भविष्यवाणी गर्न असम्भव छ भने, माल रूपमा यो ऋण श्रेणी प्रयोग गर्नुहोस्। यस मामला मा, खरीदार मात्र सबै सामान को कार्यान्वयन पछि ऋण repays। अन्यथा, माल ऋण प्रदान संस्थाको फर्काइन्छ।
मौसमी - त्यहाँ व्यावसायिक ऋण अर्को वर्गमा छ। निर्माता उत्पादनहरु भण्डारण र भण्डारण पैसा बचत गर्न सक्नुहुन्छ, र खरीदार लाभ मौसमी बिक्री समयमा व्यापारिक बेच्न सक्नुहुन्छ। खरीदार समयमा ऋण repays भने, यो यसको लागि छुट हुन सक्छ। अक्सर यो 1-3% छ।
अक्सर, वाणिज्य ऋण सम्झौता entrepreneurial गतिविधिमा संलग्न छन् गर्नेहरूलाई गरेको छ। ऋण सबैभन्दा लाभप्रद सर्तहरू प्रयोग गर्न, तपाईंले सही सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ। करार उधारो अवस्था inaccurately बाहिर रुपले उच्चारण भने, यो व्यावसायिक ऋण लागि संगठन भुक्तानी देखि ठीक गर्न गाह्रो हुन सक्छ। यो बच्न यी नियमहरू पालन:
पहिले, करार को आस्थगित भुक्तानीको लागि प्रदान गर्दछ भने, यो आवश्यक व्यावसायिक ऋण को प्रावधान लागि ऋणदाता शुल्क संग कम्पनी-उधारकर्ताओं को संग्रह दर्शाउन छ।
दोश्रो, यसलाई भुक्तानी को आकार, र यो गरिनेछ भएको सर्तहरू निर्दिष्ट गर्न आवश्यक छ। यो एक वार्षिक वा दैनिक हुन सक्छ, र प्रदान रकम निर्भर हुनेछ।
तेस्रो, यो सम्झौता मा क्रेडिट सर्तहरू र संग वस्तु दल जिम्मेवारी मा खण्ड पछि राखिएको थियो महत्त्वपूर्ण छ। क्रेडिट प्रयोग गर्न जिम्मेवारी एक उपाय हो को लागि यो पनि शुल्क टिप्पण लायक छ। यदि ऋण सर्तहरू मुद्दा को घटना मा, दल जिम्मेवारी मा खण्ड छन् वस्तु एक दण्ड भुक्तानी रूपमा व्यवहार गरिनेछ। फलस्वरूप, यो कम वा अदालत भुक्तानी गर्न इन्कार गर्न सक्छ गर्न सकिन्छ।
चौथो, सम्झौता मा एक धेरै महत्त्वपूर्ण बिन्दु व्यावसायिक ऋण को प्रयोगको लागि भुक्तानी ढिलाइ समय निश्चित काम कार्यान्वयन वा माल को ढुवानी र को मिति देखि सुरु हुनेछ भन्ने छ। वस्तु भाँचिएको छ भने, अदालत दण्ड भुक्तानीको एक सुनुवाइ नियुक्त गर्नेछ।
पूर्वोक्त आधारित देखाएअनुसार गर्न सकिन्छ। यो दल आस्थगित भुक्तानी सर्तहरू मा एउटा सम्झौता हस्ताक्षर गरे। यो आपूर्तिकर्ता व्यावसायिक क्रेडिट को प्रयोग को लागि खरीदार देखि एक निश्चित रकम चार्ज गर्न योग्य छ भन्ने हो। ऋण लागि शुल्क माल को बिक्री संग र निर्दिष्ट परिपक्वता मिति सुरु हुन्छ। ब्याज दर बेच र ऋण को प्रयोग को प्रत्येक दिनको लागि शुल्क माल को लागत को 0.1% छ। करार दायित्व को उल्लंघन को मामला मा, कार्ड जिम्मेवारी एक उपाय हो, यो ऋण को प्रयोगको लागि भुक्तानी छ।
"Tinkoff" क्रेडिट कार्ड संग नगद निकासी। सुविधाहरू क्रेडिट कार्ड
क्रेडिट सिस्टम: यसको मुख्य पक्षहरू र सञ्चालनको सिद्धान्तहरू
खुला delinquency संग एक ऋण कहाँ जरुरी लिने? सुझाव तथा तरिकाहरू
क्रेडिट के हो? नगद ऋण। एक्सप्रेस ऋण
चिकन कलेजो। यो उत्पादन को लाभ को सबै।
व्लादिमीर फ्रोलोव - म्यानुअल चिकित्सक
देवदार: रोपण र हेरविचार। एक देवदार घरेलु कसरी बढ्न
इटालियन focaccia: नुस्खा
20 औं शताब्दीको प्रारम्भमा औद्योगिक समाज: इतिहास र अवधारणा